Andro: 1 Novambra 2019
Tany Istanbul, nandritra ny fankalazana ny Andron'ny Repoblika 29 Oktobra, dia nihira teo an-dalan'ny fiaramanidina miaraka amin'ny akanjo miramirana. Na dia nizara tao amin'ny media sosialy aza ireo sary, io fihetsika io dia nadika hoe "manelingelina an'i tarafından ataon'ny Islamista sy ny fihetsik'ireo [More ...]
Lahatsary iray voarakitra tamin'ny Oktobra tamin'ny Istanbul Metro 29 dia nanintona fihetseham-po lehibe. 10 any amin'ny metro. Ny teratany iray misy turban, izay eo akaikin'ny olom-pirenena mihira amin'ny Taona Antemona amin'ny fomba mitambatra, tsy manao na inona na inona ary tsy manao na inona na inona ho an'iza. [More ...]
Ity manaraka ity ny toe-javatra farany tsy natao hamaranana ny tetik'asa hafainganam-pandeha ambony; Torkia dia mamehy sy nidina ny lalamby sy ny lavitra akaiky, izay mianatra manerana ny firenena nanomboka fotoana fohy lasa izay. Manomboka amin'ny fotoana samy hafa any amin'ny faritany maro [More ...]
Istanbul tsy nahavita niditra tao amin'ny 5 voalohany tamin'ny laharana fampandehanana fitateram-bahoaka; Ao amin'ny fikarohana mitondra ny lohateny hoe «Letsaka fampitaovana« Metropolitan Transportation »dia laharana voalohany i Eskişehir, raha Konya no laharana faharoa, Erzurum no laharana fahatelo, I 10 no laharam-pahamehana kokoa ao anaty fitateram-bahoaka. [More ...]
Ny indostrian'ny fiarovana voalohany. Izy ihany koa no mpamokatra fatana coterie sy boaty vola amin'ny banky nostalgic İş Bank. Lasa mpinamana izy ireo rehefa nitifitra ny Atatürk tao 1913 tao Sofia. Zübeyde Hanım dia nilaza tamin'ny zanany lahy tamin'ny taratasy iray: destek Support Şakir ”. [More ...]
Suspectsnalan Metro Station ahiana ho ahiana ny fihetsik'ireo mpandeha sembana, dia nifandray tamin'ny rainy ny fianakaviany. Nihaona tamin'ny zanany lahy i Dada, nandritra ny andro niasany tao amin'ny ora, satria nanelingelina ny vadiny [More ...]
Minisitry ny Kolontsaina sy ny fizahantany Mehmet Nuri Ersoy: “Manantena aho fa raha tsy mifikitra amin'ny fanoherana ny toetr'andro isika dia tena sarotra ny miasa ao amin'ny orana, mahita ny toe-javatra miasa ianao, saingy rehefa tonga ny fotoana, manantena aho fa amin'ny fanaovana asa-dehibe kokoa ny 2020 18 [More ...]
Vodafone 41 hilatsaka ny alahady izao. Ao amin'ny Istanbul Marathon, hisokatra tsy ho an'ny fiara ny lalana fa ho an'ireo mpankafy fanatanjahantena. 15 Jolay Ny lalana rehetra sy ny làlana mifamatotra rehetra, ao anatin'izany ny tetezana Martyrs, 3 Novambra [More ...]
Ao amin'ny tatitra momba ny 2019 ny ampahefan'ny 3, nilaza ny masoivoho Kosovo statistika fa tamin'ny volana 3 farany, manodidina ny 90 an'arivony no nampiasa ny lamasinina ho fitaovana fitaterana. Fiantsenana, lalamby, lalana [More ...]
Ny kaominina Metropolitan Ordu, izay nahatsapa ny fampiasam-bolan'ny arabe izay mamofotra ny fifamoivoizana an-tanàna amin'ny alàlan'ny lalana hafa, dia nanafaingana ny asany tao amin'ny Streetehit Birol Yıldırım Street, izay noforonina mba hampihenana ny fifamoivoizana ao amin'ny onehit Yalçın Yamaner Boulevard. vaovao [More ...]
Fomba fanaovana doka amin'ny tarehimarika marobe ao Ankara amin'ny vaton'orinasa; Ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia nanoratra ny drafitra matematika, fizika ary simika amin'ny vato vakora izay nohavaozina tao amin'ny Yüksel Street ao ambadiky ny "Red Crescent Renewal Project". Munisipaly Lehibe mba hanairana ny saina [More ...]
Mampihetsi-poika ny fikorontanana amin'ny lapa Ankara sy ny manodidina azy; Ny departemantan'ny kolontsaina ara-kolontsaina sy voajanahary voajanahary ao Ankara dia manohy manatsara ny lapa Ankara sy ny fehiny miaraka amin'ny fihetsika aestetika mifanaraka amin'ny haza ara-tantara. Trano misy ny sivilizasiona marobe [More ...]
Mitohy ny fampiharana amin'ny lalana mivaingana natolotry ny Kaominin'i Manisa Metropolitan amin'ny lalana izay manome fifandraisana eo amin'i Gölmarmara sy Thienen. Solombavambahoaka jeneralin'ny monisipaly ao Manisa Metropolitan Ali Öztozlu sy Burak Aslay, làlana monisipaly Metropolitan [More ...]
Miaraka amin'ny famatsiam-bolan'ny Kayseri Metropolitan Munich, Erciyes Ski Center, izay lasa iray amin'ireo ivotoerana ski indrindra eto an-tany dia miomana amin'ny vanim-potoana ririnina 2019-2020. Erciyes, izay lasa iray amin'ireo ivotoerana ski indrindra eto an-tany miaraka amin'ny famatsiam-bolan'ny Kayseri Metropolitan Munisipaly. [More ...]